Facebook ပေါ်က Relationship – Gentleman Magazine
Facebook ပေါ်က Relationship
ချစ်သူရည်းစားတွေ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ စကားများရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း၊ လမ်းခွဲပြတ်ဆဲကြတဲ့အခါတိုင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားပြဿနာတစ်ခုခုတက်တိုင်း Facebook profile ကို deactivate လုပ်လိုက်၊ သိပ်မကြာခင်ပြန်ပြီး Activate လုပ်လိုက်နဲ့ မကြာခဏလုပ်တတ်သူတွေကို တွေ့ဖူးမှာပါ။ စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလို လုပ်ဖူးမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါဆို လူတွေဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ကြရတာပါလဲ။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေတွေ့ကြုံရချိန်မှာ Facebook ပေါ်က အမှတ်ရစရာတွေအားလုံးကို ဖျက်ပစ်လိုက်ဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့်များ Activate ပြန်လုပ်ကြတာပါလဲ။ Facebook ကြောင့် လမ်းခွဲပြတ်ဆဲမှုတွေ၊ မိတ်ပျက်ဆွေပျက်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေ ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့် နောက်ထပ်သုံးနေဦးမှာပါလဲ။
သင့်ဘ၀မှာဖြစ်ပျက်နေသမျှအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Facebook ပေါ်မှာ မိတ်ဆွေတုတွေဆီက ထောက်ခံမှုကို လိုအပ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့် Facebook account ထဲက သူငယ်ချင်းအားလုံးက မိတ်ဆွေတုလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးက သင့်မွေးနေ့မှာ ဖုန်းဆက်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပြောသလား စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မပြောပါဘူး။ ဒ့ါကြောင့် သင်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများသူငှာရဲ့ ထောက်ခံမှုကို Facebook ပေါ်မှာ မရှာပါနဲ့။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့က သင့်ကိုယ်သင် ထောက်ခံဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
စကားပြောပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ချစ်သူ၊ သူငယ်ချင်း၊ သင့်ကို မကျေနပ်စရာတစ်ခုခုဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့သူ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် တိုက်ရိုက်စကားပြောပါ။ Facebook ပေါ်မှာ နာကျည်းစိတ်နဲ့ ခံပြင်းတဲ့ပို့စ်တွေတင်ပြီး မြင်တဲ့သူတွေရဲ့ သနားဂရုဏာသက်မှုကို လိုချင်တာမျိုးက ကလေးကလားဆန်လွန်းပါတယ်။ ချစ်သူရည်းစားချင်းအဆင်မပြေတိုင်း Status တင်တာဟာ သင့်ချစ်သူကို လူဆိုးတစ်ယောက်အဖြစ် ပုံဖော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူက တကယ်လည်း ဆိုးချင်ဆိုးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်း လူတကာကို ဘာလို့အသိပေးနေမှာပါလဲ။ Facebook ကနေထွက်ပြီး တိုက်ရိုက်စကားပြော ဖြေရှင်းပါ။
အားကျခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မနာလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့အတွက်မှ မကောင်းသလို ကိုယ်တိုင်လည်း ခံစားလို့ကောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Facebook ပေါ်မှာ အစစအရာရာ အားလုံးအဆင်ပြေနေသလို ပုံတွေတင်နေလေ့ရှိတဲ့ စုံတွဲတွေကလည်း မြင်ရသူတွေ အထင်ကြီးအားကျလောက်တဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခုကို ဖန်တီးနေရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက်က တကယ့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်နေဖို့ထက် ပုံတွေတင်နိုင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးနေတတ်ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးအချက်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ Facebook သုံးတိုင်းမှာ အတိတ်ရဲ့ ခြောက်လှန့်မှုတွေ ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုးချည်းပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေက ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာ အမှတ်တရကိစ္စလေးတွေကို ပြန်အစဖော်ပေးတာဆိုရင်တော့ Facebook ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြည်နူးစရာမဟုတ်တဲ့ အချိန်တွေ၊ ပုံတွေကို ပြန်မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်နှလုံးထိခိုက်စရာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ချစ်သူရည်းစားရှိသူတွေအနေနဲ့ Facebook ကို အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူစကားပြောနေချိန်မှာ ဖုန်းကိုချထားပါ။ Selfies ရိုက်မနေပါနဲ့။ သူမအတွက် အပြည့်အ၀အာရုံစိုက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Facebook အတွေ့အကြုံတွေက တူချင်မှတူမှာဖြစ်သလို အားလုံးကလည်း ဒီအချက်တွေကို လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ Facebook က အလုပ်အကိုင်အတွက် လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဖို့ ကြားခံတစ်ခုအနေနဲ့လောက်ပဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Facebook ပေါ်မှာ တင်တာ၊ ဝေမျှတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထိန်းအကွပ်လေးရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သင်ရော ဘယ်လို ထင်ပါသလဲ??
Facebook ပျေါက Relationship
ခဈြသူရညျးစားတှေ၊ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကွေားမှာ စကားမြားရနျဖွဈတဲ့အခါတိုငျး၊ လမျးခှဲပွတျဆဲကွတဲ့အခါတိုငျး၊ ဒါမှမဟုတျ အခွားပွဿနာတဈခုခုတကျတိုငျး Facebook profile ကို deactivate လုပျလိုကျ၊ သိပျမကွာခငျပွနျပွီး Activate လုပျလိုကျနဲ့ မကွာခဏလုပျတတျသူတှကေို တှဖေူ့းမှာပါ။ စာဖတျသူကိုယျတိုငျလညျး ဒီလို လုပျဖူးမှာ သခြောပါတယျ။ ဒါဆို လူတှဘောကွောငျ့ ဒီလိုလုပျကွရတာပါလဲ။ စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈစရာ အဖွဈအပကျြတှတှေကွေုံ့ရခြိနျမှာ Facebook ပျေါက အမှတျရစရာတှအေားလုံးကို ဖကျြပဈလိုကျဖို့ အရေးတကွီးလိုအပျတယျဆိုရငျ ဘာကွောငျ့မြား Activate ပွနျလုပျကွတာပါလဲ။ Facebook ကွောငျ့ လမျးခှဲပွတျဆဲမှုတှေ၊ မိတျပကျြဆှပေကျြဖွဈရပျတှနေဲ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈစရာတှေ ကွုံတှရေ့တယျဆိုရငျ ဘာကွောငျ့ နောကျထပျသုံးနဦေးမှာပါလဲ။
သငျ့ဘဝမှာဖွဈပကျြနသေမြှအကွောငျးအရာတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး Facebook ပျေါမှာ မိတျဆှတေုတှဆေီက ထောကျခံမှုကို လိုအပျနတောကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ သငျ့ Facebook account ထဲက သူငယျခငျြးအားလုံးက မိတျဆှတေုလို့ပွောတာတော့မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ အှနျလိုငျးမိတျဆှတှေအေားလုံးက သငျ့မှေးနမှေ့ာ ဖုနျးဆကျပွီး မှေးနဆေု့တောငျးပွောသလား စဉျးစားကွညျ့ပါ။ မပွောပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျတို့ခဈြသူနှဈဦးကွား ဆကျဆံရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး အမြားသူငှာရဲ့ ထောကျခံမှုကို Facebook ပျေါမှာ မရှာပါနဲ့။ အဆငျပွပြေျောရှငျတဲ့ ဆကျဆံရေးတဈခုကို တညျဆောကျနိုငျဖို့က သငျ့ကိုယျသငျ ထောကျခံဖို့ပဲ လိုပါတယျ။
စကားပွောပါ။ ဟုတျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ခဈြသူ၊ သူငယျခငျြး၊ သငျ့ကို မကနြေပျစရာတဈခုခုဖွဈအောငျ လုပျတဲ့သူ ဘယျသူပဲဖွဈဖွဈ တိုကျရိုကျစကားပွောပါ။ Facebook ပျေါမှာ နာကညျြးစိတျနဲ့ ခံပွငျးတဲ့ပို့ဈတှတေငျပွီး မွငျတဲ့သူတှရေဲ့ သနားဂရုဏာသကျမှုကို လိုခငျြတာမြိုးက ကလေးကလားဆနျလှနျးပါတယျ။ ခဈြသူရညျးစားခငျြးအဆငျမပွတေိုငျး Status တငျတာဟာ သငျ့ခဈြသူကို လူဆိုးတဈယောကျအဖွဈ ပုံဖျောနတောပဲဖွဈပါတယျ။ သငျ့ခဈြသူက တကယျလညျး ဆိုးခငျြဆိုးပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီအကွောငျး လူတကာကို ဘာလို့အသိပေးနမှောပါလဲ။ Facebook ကနထှေကျပွီး တိုကျရိုကျစကားပွော ဖွရှေငျးပါ။
အားကခြံရတာပဲဖွဈဖွဈ၊ မနာလိုတာပဲဖွဈဖွဈ ဘယျသူ့အတှကျမှ မကောငျးသလို ကိုယျတိုငျလညျး ခံစားလို့ကောငျးမှာ မဟုတျပါဘူး။ Facebook ပျေါမှာ အစစအရာရာ အားလုံးအဆငျပွနေသေလို ပုံတှတေငျနလေရှေိ့တဲ့ စုံတှဲတှကေလညျး မွငျရသူတှေ အထငျကွီးအားကလြောကျတဲ့ ပုံရိပျတဈခုကို ဖနျတီးနရေုံပဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့အတှကျက တကယျ့ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျပြျောရှငျနဖေို့ထကျ ပုံတှတေငျနိုငျဖို့က ပိုအရေးကွီးနတေတျပါတယျ။
အဆိုးဆုံးအခကျြလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။ Facebook သုံးတိုငျးမှာ အတိတျရဲ့ ခွောကျလှနျ့မှုတှေ ခံရနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆိုးခညျြးပဲတော့ မဟုတျပါဘူး။ လှနျခဲ့တဲ့အခြိနျတှကေ ကွညျနူးပြျောရှငျစရာ အမှတျတရကိစ်စလေးတှကေို ပွနျအစဖျောပေးတာဆိုရငျတော့ Facebook ကို ကြေးဇူးတငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကွညျနူးစရာမဟုတျတဲ့ အခြိနျတှေ၊ ပုံတှကေို ပွနျမွငျတှရေ့မယျဆိုရငျတော့ စိတျနှလုံးထိခိုကျစရာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ခဈြသူရညျးစားရှိသူတှအေနနေဲ့ Facebook ကို အကနျ့အသတျနဲ့ပဲ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။ သငျ့ခဈြသူစကားပွောနခြေိနျမှာ ဖုနျးကိုခထြားပါ။ Selfies ရိုကျမနပေါနဲ့။ သူမအတှကျ အပွညျ့အဝအာရုံစိုကျနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။
လူတဈယောကျခငျြးစီရဲ့ Facebook အတှအေ့ကွုံတှကေ တူခငျြမှတူမှာဖွဈသလို အားလုံးကလညျး ဒီအခကျြတှကေို လကျခံနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ တကယျတမျးတော့ Facebook က အလုပျအကိုငျအတှကျ လူမှုကှနျယကျတဈခုအနနေဲ့ ဒါမှမဟုတျ ဝေးကှာနတေဲ့မိသားစုတှနေဲ့ အဆကျအသှယျမပွတျစဖေို့ ကွားခံတဈခုအနနေဲ့လောကျပဲ ကောငျးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ Facebook ပျေါမှာ တငျတာ၊ ဝမြှေတာတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အထိနျးအကှပျလေးရှိဖို့ လိုအပျတယျလို့ ထငျပါတယျ။ သငျရော ဘယျလို ထငျပါသလဲ??
Previous: ချစ်သူမိန်းကလေး အချစ်ပိုစေမည့် အချက်များ
Next: ပျော်ရွှင်နေသည့် စုံတွဲများ၏ နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်များ